Madaxweyne Xasan oo saxiixay Sharciga Axsaabta Siyaasadda (Daawo Sawirad) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa gelinkii dambe ee Axadii saxiixay Sharciga Axsaabta Siyaasadda, oo dhawaan uu meelmariyay Baarlamaanka.
Munaasabad ka dhacday Aqalka Madaxtooyada (Villa Somalia), ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxda Qaranka, Xildhibaano, Siyaasiyiinta Xisbiyada qaarkood, Guddiga Doorashooyinka iyo xubno kale.
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya oo ka hadlay munaasabadaasi, ayaa sheegay in shaqooyinkii ugu muhiimsanaa lagu meelmariyay Kalfadhigii 8-aad ee Baarlamaanka laga tilmaami karo ansaxinta Sharciyada Axsaabta Siyaasadda, Xuquuqul Insaanka iyo Dhismaha Maxkamadda Dastuuriga.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay tallaabada ay ku meelmariyeen Sharciyadaan inay ka dambeysay, anagoo ku daba joogno buu yiri siyaasaddii dimoqraadiyeenta ee naloo doortay.
Madaxweynaha Somaliya oo sidoo kale ka hadlaayay munaasabadaasi, ayaa sheegay Xisbiyasadda Siyaasadda in looga baahan yahay inay noqdaan kuwo ku dhisan ajandayaal siyaasadeed, oo lagu horumarin karo dalka iyo dadka, sida uu yiri.
Siyaasiyiinta Xisbiyada, ayaa muddooyinkii ugu dambeysay dhaliilo xoogan u jeedinaayay Xukuumadda Muqdisho, ka dib markii ay sheegeen in ay ka gaabisay meelmarinta Nidaamka Axsaabta.